Argentina oo Usoo Baxday Koobka Aduunka iyo Mareykanka oo Haray
Lionel Messi dans les bras d'un de ses coéquipiers après la victoire 3-1 contre l'Equateur, Quito, le 10 octobre 2017 (FIFA)
Xidiga caanka ah ee Lionel Messi ayaa u suura geliyay xulkiisa Argentine in ay usoo baxaan ciyaaraha koobka aduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka Russia, kadib marki ay xalay 3-1 ugu awood sheegteen xulka Ecuador.
Argentine ayaa u baahneyd guul kulankeedi ugu danbeeyay ee is-reeb-reebka koobka aduunka ee qaarada Latin America. Guusha Argentine ayaa waxaa kabtay bar-barrihi kasoo baxay ciyaati dhexmartay isla xalay xulalka Colombia iyo Peru iyo sidoo kale guuldaradi ay Chile kala kulmeen Brazil.
Argentine waxay hadda ku dhameysatay kaalinta saddexaad. Waxaa booska koowaad mar hore xiratay xulka Brazil oo xalay 3-0 ku suuldaaray kooxda qaranka ee Chile. Chile waa ay ka hartay oo waxay ku dhameysatay kaalinta lixaad.
Kaalinta labaad ayaa waxaa xiratay kooxda qaranka ee Uruguay oo xalay 4-2 ugu badisay xulka Bolivia. Laba ka mida goolasha waxaa dhaliyay Luis Suarez.scored twice as Uruguay beat Bolivia 4-2 to qualify, with Colombia also advancing with a 1-1 draw in Peru.
Peru oo ku dhameystay is-reeb-reebka kaalinta shanaad ayaa aadi doonta ciyaaraha kala sooca ah, waxaana ay laba wareeg la dheeli doontaa xulka New Zealand.
Dhinaca Waqooyiga iyo Bartamaha America, ciyaaro la yaab leh ayaa xalay dhacay. Xulka Mareykanka ayaa ka haray koobka aduunka ee sanadka soo socdo, kadib marki ay xalay 2-1 ku lumisay xulka yar ee Trinidad and Tobago.
Waa marki ugu horreysay oo uu si toos ah ugu soo bixi waayo koobka aduunka tan iyo sanadki 1986-ki.
Xulka Panama ayaa isna taariikh sameeyay kadib marki ay xalay usoo baxeen koobka aduunka ee sanadka danbe, marki ugu horreysay taariikhda. Waxay 2-1 ku khaarijiyeen xulka Costa Rica.
Honduras waxay 3 - 2 ku cuntay Mexico. Balse Mexico iyadu waa ay soo baxday. Waxaa sidoo kale toos usoo gudbay Costa Rico waloow laga badiyay.